Ethiopia: Biden oo saxeexay amar fulineed oo oggolaanaya cunaqabateyn | Berberanews.com
Home WARARKA Ethiopia: Biden oo saxeexay amar fulineed oo oggolaanaya cunaqabateyn
USA-(Berberanews)-Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa saxiixay amar cusub oo fulineed Jimcihii kaas oo oggolaanaya cunaqabatayn ballaadhan oo lagu soo rogo kuwa ku lugta leh rabshadaha ka socda Itoobiya iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya xasuuqyo ka socdaan gobolka Tigray.
Maamulku markiiba kuma soo rogin cunaqabateyn amarka cusub, laakiin “wuxuu diyaar u yahay inuu qaado tallaabo” haddii aanay dhinacyada – oo ay ku jiraan dowladda Itoobiya, xukuumadda Eritrea, Jabhadda Xoreynta Dadka Tigrayga, iyo Gobolka Amxaarada – tallaabooyin macno leh oo lagu galo wada -hadal xabbad -joojin laga wada xaajoodo oo loo oggolaado helitaanka gargaarka bani’aadamnimo, “ayuu sarkaal sare oo maamulka ka tirsan u sheegay wariyeyaasha.
Sarkaalkaan ayaa sheegay in maamulku uu raadinayo inuu arko ficil “toddobaadyo gudahood.” Biden wuxuu oggolaaday amarka fulinta ka dib markii maamulku “xidhiidho la sameeyay muddo bilooyin ah inay dhinacyadu u baahan yihiin inay beddelaan sida wax u socdaan,” ayuu yidhi sarkaal sare oo labaad oo ka tirsan maamulka Aqalka Cad.
Xoghayaha Arrimaha Dibedda Antony Blinken ayaa Jimcihii sheegay in “horumar cad oo la taaban karo oo ku aaddan xabbad -joojin laga wada xaajoodo iyo joojinta xad -gudubyada – iyo sidoo kale helitaan gargaarka bani’aadamnimo oo aan la carqaladayn dadka Itoobiyaanka ah ee dhibaataysan – Maraykanku wuxuu magacaabi doonaa hoggaamiyeyaal, ururro, iyo hay’adaha hoos yimaada nidaamkan cusub ee cunaqabataynta. “
Waddo kale ayaa suurtogal ah ‘ Bayaan uu soo saaray Jimcihii, Biden wuxuu ku sheegay in “colaadda ka aloosan woqooyiga Itoobiya ay tahay masiibo sababaya dhibaato aad u weyn oo bani’aadamnimo waxayna halis ku tahay midnimada dawladda Itoobiya.”
“Mareykanka waxaa ka go’an in uu riixo in si nabad ah lagu dhameeyo iskahorimaadkan, waxaana taageero buuxda siin doonnaa kuwa hoggaaminaya dadaallada dhexdhexaadinta,” ayuu yirdh.
“Waxaan ku biirayaa hoggaamiyeyaasha ka socda Afrika iyo adduunka oo dhan anigoo ku boorrinaya dhinacyada dagaallamaya inay joojiyaan ololahooda milatari oo ixtiraamaan xuquuqda aadanaha, u oggolaadaan marin -u -helida gargaarka bani’aadamnimo ee loo baahanyay, oo ay yimaadaan miiska wada -xaajoodka shuruud la’aan. Ciidamada Eritrea waa inay ka baxaan Itoobiya,” Biden ayuu yiri.
Blinken wuxuu xusay in “haddii dhinacyadu ay qaadaan tillaabooyin degdeg ah” oo ku aaddan ujeeddooyinkaas, “Mareykanku wuxuu diyaar u yahay inuu dib u dhigo cunaqabateynta oo uu diiradda saaro taageeridda geeddi -socodka gorgortanka.”
Kaaliye ka tirsan aqalka Senate -ka ayaa CNN u sheegay in safaaradaha Mareykanka ee Itoobiya iyo Eritrea ay durba aqoonsadeen magacyada qaar ka mid ah bartilmaameedyada cunaqabateynta.
Joe biden Ethiopia
Previous articleFaransiiska oo safiirradiisii kala baxay US iyo Australia
Next articleHargeysa: Bandhigga buug Afsomaliga laga qoray 122 sano ka hor